Unogona kurima matomatisi mugwenga nekuda kwesimba rezuva | Green Renewables
Madomasi anogona kurimwa mugwenga nekuda kwesimba rezuva
ChiGerman Portillo | | Kurima kwezvakatipoteredza, Renewable simba
Simba rinowedzerwazve rakaratidza kuve rinobatsira uye rinoshanduka kana zvasvika pakuita mazano matsva. Hukuru hunyanzvi hwehunyanzvi huri kuitwa nhasi mumisika nekuda kwesimba rinowedzerwazve. Kubva kumakambani madiki anozvishandira nemagetsi munzira itsva dzekuuya kune bhizinesi, simba rinowedzerwazve rinogona kubuda.
Ndiani aifanira kuti unogona kurima madomasi pakati perenje, pasina kusvibisa uye pasina kuburitsa magasi ekupfumisa mumhepo. Zvakanaka, ichi chatova chokwadi chinoitwa nepurazi repurazi muAustralia. Iyo tekinoroji yekuzviita inogadzirwa nekambani yeDanish Aalborg CSP.
Iyi kambani yakwanisa kuisa rakadzika simba rezuva system iyo inokwanisa kuendesa simba uye nekurasa mvura yakachena inodiwa kuti ikwanise kugadzira angangoita 17 miriyoni kg yemanyowa madomasi pagore. Izvi zvakaenzana ne15% yemusika wese wemadomasi weAustralia.
Iyi kambani yekupayona yakatanga kushanda nzvimbo iri papurazi reSundrop (Port Augusta) rakazara muna Gumiguru 6 mwedzi uno. Iyo yakaoma iko iko iko iko iko ndeyeyekurima kurima mune yakaoma nyika uye ine iine zviuru makumi maviri emamirimita emagetsi ezvivakwa. Kubatsira kweizvi zvivakwa ndezvekuti hazvitsamire pamafuta emafuta uye matsva emvura kuti vashande, asi pachinzvimbo vanoshandisa simba rinowedzerwazve kuti vakwanise kushambidza mvura inodiwa mukudiridza uye nekupa simba rinodiwa pakurima kwavo.
Kuti izadzikise izvi zvinodikanwa zvemasimba nemvura, kambani yeDanish yakagadzira chirongwa cheCSP chinokwanisa kupa simba rinodiwa kupisa greenhouse uye kukwanisa kudiridza matomatisi. Simba rinogadzirwa iyo 23.000 heliostats yakaiswa padenga rerenje, iyo inounganidza mwaranzi yezuva uye inoimisikidza pamusoro pe 127m kukwirira kwesolar tower.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Madomasi anogona kurimwa mugwenga nekuda kwesimba rezuva
Vanovandudzwa vanonetseka kuwana mari muSpain
Yakawandisa radioactive uranium yakaonekwa kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweMediterranean